Nceda uqaphele: uxwebhu lweCovid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) ngumgibe weendaba ezingezizo: UMartin Vrijland
Umthombo: iqhagamshelwe ngokupheleleyo.nl
ICovid-19 Janet Ossebeard (imijikelezo yesityalo, Ninefornews) I-coronavirus documentary (jonga ngezantsi) ngumgibe. Kuya kufuneka uyazi ukuba i-IBM ye-Blue Blue supercomputer enkulu al kwi-1996 yeentshatsheli zehlabathi uKasparov nge chess kunye nekhompyuter yeAlfum yeOfmum ka-2016 intshatsheli yehlabathi yomdlalo ontsonkothileyo Yiya wakwazi ukubetha. Ukongeza, kuya kufuneka wazi ukuba amajelo eendaba anakho ukumilisela yonke into, kubandakanya yonke into (kuquka nethiyori yethamsanqa) bona ngokwabo.
Banokubeka yonke into kunye njengefilimu kwaye bakwenze ukuba ucinge ukuba yeyona nyani iindaba, ukwenzela ukuba abakhangeli beendaba abanjengeNuCheck.nl bayitshise kwinqanaba elizayo. Ngayo yonke idatha enkulu yokuqokelelwa namhlanje, iinkokheli zehlabathi ziyazi ukuba zidlala njani iindimbasi zabantu ukuya kwinqanaba lokujolisa.
Into ebubulumko ngayo yonke le nto kukuba kuninzi okuyinyani kwinto yokuba iindaba ezizivelileyo zisetyenzisiwe, kodwa ngenxa yokuba kamva abantu beza “nobungqina” bokuba kukho iindaba ezingeyonyani, banokumkhuphela umntwana ngamanzi okuhlamba.
Ndingathanda ukugxininisa oku kuwe ndikucebise ukuba ngokwenene uyifunde kwaye usasaze incwadi yam. Akukho mntu wokubonisa ubuchule benkcaso ezilawulwayo. Ayizilishumi elinesine, ayifuni iToKnow, hayi iJensen, hayi iNiburu, hayi ii-infowars. Kungenxa yokuba bangumgca wokugqibela. Musa ukwenza igadi kuyo! In eli nqaku kwaye kwincwadi yam ndicacisa le ndlela yokuchasa elawulwayo ngokweenkcukacha.
Mamela apha umzekelo wendlela yomgca wokugqibela: mzekelo
Kule posi isuka metro.co.uk Bona ukuba le vidiyo kaJanet Ossebaard kungekudala iza kubhalwa njani njengeendaba ezingeyonyani.
Uxolo, andifuni ukuba ngu-cocky kwaye ndibukrelekrele, kodwa ndawuyeka umsebenzi wam ngaphezu kweminyaka esixhenxe eyadlulayo kuba ndicatshukiswa bubuxoki kumajelo eendaba. Okwelo xesha, umzekelo, bendisakholelwa kuAlex Jones 'infowars kwaye ndaphelela kwiminye imijikelezo yeendaba. Ke ndingafumanisa ngaphakathi ukuba bonke bebengonwabanga kakhulu yile duck ingaqhelekanga kuluma (bona ngcaciso).
Yiba bukhali kwaye ungaweli kwiminatha yokhuseleko kunye namajoni emfazwe aphikisayo alawulayo (jonga incwadi yam ukufumana ulwazi ngakumbi, nangona kunjalo umthungi olu luhlu olulandelayo).
Kwiintsuku zamva nje, iividiyo ezininzi zithunyelwe kum ukuba zindibambe kwaye ukundikhuthaza ukuba ndithumele imiyalezo enokuthi ibhalwe njengeendaba ezingezizo; ndicinge ngokuzama ukumnyama indawo yam. Ke kufuneka ngokwenene ulumke kwaye uhlale ugxeka. Kwincwadi yam ndichaza indlela eya kumthombo wokuphela kolwazi oluchanekileyo (okwakho) kunye nendlela esinokuyenza ngayo le ntsholongwane.
"Eyona ndlela ilungileyo yokulawula inkcaso kukukhokelela ngokwakho", uVladimir Lenin
Uludwe lwekhonkco lovimba: isigama.nl, ninefornews.nl, wikipedia.org bbc.com
Kutheni sifunyiwe kwi-911 net net ngokusebenzisa abantu abafana noGeorge van Houts
Ngaba uMartin Vrijland ulawula ukuchaswa? Hayi: Funda apha ukuba kutheni ukuba akunjalo!
tags: ngenye indlela, amanzi okuhlamba, Indawo yokucwangcisa iyelenqe, i-theory, iingcamango zobuqhetseba, lawulwa, coronavirus, Covid-19, documentary, olungeyonyani, eziziimbalasane, Janet, Bubele, eendaba, iindaba ezibuxoki, iindaba, ninefornews, inkcaso, I-Ox-iindevu, lukal.nl, I-valstrik
23 Matshi 2020 kwi-23: 25
Umzekelo, ngaba uyakholelwa ngokwenene ukuba uRobert Jensen yinkcaso yokwenene? Wenza iividiyo ezilungileyo! Yeyiphi studio ocinga ukuba aqesha kuyo ukwenza umboniso wakhe? Leyo (i-Arhente yoNxibelelwano yeDutch Jikelele) uJohn de Mol mhlawumbi?
Vuka ngenene ... iminatha yokhuseleko: umgca wokugqibela
Ekugqibeleni ziye zishenxiswe ngesikhalazo ukwenzela ukufaka umnatha wokhuseleko ogcwele-kunye nabalandeli kunye nabo bonke - kwi-oveni yomlilo.
Utshintsho lwangempela aluveli emadodeni nakubafazi emva kwekhamera! Oko kukugcina ekukhohlisweni ukuba baya kukucwangcisela. Utshintsho lwe-REAL luqala ngokuzivuselela ngokwakho!
23 Matshi 2020 kwi-23: 45
Uthetha njani nabantu ngokungathi bajonga iiTelebbies. Isitalato saseSesame!… Pffff uyeke lo mxube wenyaniso engenantsingiselo! "I-Cabal," "uTrump Msindisi," "Q" ("ulungile kuwe"), nangaphezulu zolu hlobo lonxibelelwano lwethi.
Madam ngokufihlakeleyo ukhuthaza umbono wobukomanisi!
I-Trump ayisiye umsindisi! Kwaye ukusetwa kwezemali okwabizwa ngulo 'mjikelo wesityalo' uMadam kucwangciswe kakuhle kwaye kuziswa ngento evelayo phantsi kwamehlo akho, nguTrump kwi-hood. Imephu yendlela eya kwitekhnoloji yobukomanisi (itititori) "Yindawo yoSindiso" .. ekhuthazwe 'sisangqa sezityalo' uJannet Ossebaard. Iindlela zetekhnoloji: zilawulwa ngetekhnoloji ... ngoko i-AI ... idatha enkulu: imodeli yaseTshayina yobukomanisi bezobugcisa! Umbutho wobuzwe obuKhulu Yile nto ikhuthazwayo leli nenekazi!
24 Matshi 2020 kwi-00: 20
Molo John de Mol: UDiewertje Blok ebeya kuba lelona khetho lilicebo lobuchule bokhuseleko….
24 Matshi 2020 kwi-00: 35
Ukucaphula (9:30 imiz.): "Ukuba ukuvaliweyo kuvaliwe kwimithombo yeendaba zentlalo, musani ukoyika kuba u-Operation Defender 2020 uthunyelwe ukubamba oorhulumente abonakeleyo."
Hayi 'isangqa sesityalo' ... iya kusetyenziselwa ukumisa abantu ukuba banxibelelane, ukuze bangavukeli kukuvalelwa kwayo okokugqibela.
24 Matshi 2020 kwi-01: 15
UShill Micha Kat ukhuthaza ibali elifanayo le-Q Anon yokhuseleko
24 Matshi 2020 kwi-11: 49
Zizonke Kwaye bafundile amagqabantshintshi ngezantsi, nabo bakhahlela i-hook, umgca kunye nesinki. Ewe banokuthanda ukukholelwa umyalezo owakhayo.
Ubhuti omkhulu uya kusisindisa kwi-elites embi, Thanda umzalwana omkhulu, trust enkulu umzalwana, trust Trump, trust the Army. Kuya kuvela ucwangco lwehlabathi elitsha loxolo kunye nemvisiswano
Baza kuvuka ngendlela eyoyikisayo xa sele kusemva kwexesha.
E-US, nawe, ngoku unoluhlobo lomntu ophambeneyo oshumayela olu hlobo lomyalezo. I-sasquatch iyakusisindisa, abasemzini bayakusisindisa, uTrump uya kusisindisa, umkhosi uya kusisindisa.
24 Matshi 2020 kwi-12: 29
Iziphumo ezininzi zerhasi ephantsi kwale vidiyo (icandelo le-covid19 3). Jonga ezinye iakhawunti engemva kwezimvo. Uninzi lunayo malunga neevidiyo ze-youtube ezifanayo kunye ne-1 okanye ii-2 ababhalisile. Iiakhawunti ze-YouTube ezingacacanga zifana neeakhawunti ezingeyonyani okanye zenziwe ngabantu abambalwa abafanayo
24 Matshi 2020 kwi-12: 33
Igcwele iiakhawunti ezingezizo, iiakhawunti ezinzulu zenkohliso kunye ne-AI bots eziphendula kwimidiya yoluntu. Awusakwazi ukuthatha iimpendulo kwiziteshi eziphambili zeendaba zentlalo kwaye ungazihoyi.
24 Matshi 2020 kwi-16: 43
« I-Bill Gates 'yenani lamachaphaza' ikhadi lesazisi engenazingcingo esigcina ujonge ukuba ingaba unayo i-coronavirus nokuba ukhe wagonywa na.
Ukuhlaziywa kwe-Coronavirus covid-19 ukuvala ukuvalwa: Xa uvuka kwaye uqaphela ukuba ubanjiwe, yintoni onokuyenza? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.330.116